U-Kang Biotech uzakuzimasa i-WPE kunye ne-WHPE 2021 eXi'an-News-Lianyuan Kangbiotech Co, Ltd
U-Kang Biotech uzakuzimasa i-WPE kunye ne-WHPE 2021 eXi'an
Ixesha: 2021-07-26 Indawo: 49
I-2021 "Izicatshulwa zeNdalo yeNtshona yeNdalo, iZinto eziXabisekileyo zaMachiza, iMveliso yeZinto eziLuhlaza eziNtsha, uMboniso weMveliso yezeMpilo" iya kuba ngumnyhadala ophezulu ogcwele amandla, kunye nabathengi basekhaya nakwamanye amazwe kunye neengcali zeshishini. Umboniso uza kubanjelwa e-Xi'an, e-China ukusukela nge-28 ukuya kwi-30 ku-2021, XNUMX.
Iindwendwe kunye nababonisi babelane ngezixhobo zabathengi abathengisayo abangama-50,000 XNUMX ukunceda ababonisi bandise amajelo oshishino. Indawo yomboniso idibanise abavelisi abakumgangatho ophezulu kumacandelo ezityalo zendalo, ukutya kwendalo, i-biomedicine, isondlo kunye neemveliso zempilo, uphuhliso lweemveliso kunye nobuchwephesha bemveliso. Baninzi abavelisi abakumgangatho ophezulu kwintshona yeChina.
Iphondo laseShaanxi elisentshona kuphela lineenkampani ezingaphezu kwama-800 zokukhupha izityalo. Umzi mveliso wamayeza womelele kakhulu. Ngokwengxelo yeNkomfa yokuPhakanyiswa koPhuhliso lweMizi-mveliso, liPhondo laseShaanxi kuphela elineendidi ezingama-80 zoxubo-mayeza kunye nentengiso yonyaka engaphezulu kwe-100 yezigidi zeerandi. Ixabiso lonyaka lokuphuma kwe-biomedicine yi-yuan eyi-75 yezigidigidi, kwaye imveliso epheleleyo kunye nentengiso yenkqubo ye-blockchain yenziwe. Isiseko seshishini esomeleleyo sinomtsalane kubathengi abavela e-China nakwihlabathi liphela ukuba bahlangane apha.
"Umboniso weMveliso yezeMpilo yaseTshayina yaseNtshona" uzakusebenzisana ukwenza isidlo esinegunya kwilizwe lonke! Ikomidi eliququzelelayo liza kuxhomekeka kumaziko aququzelela umboniso wamazwe aphesheya ukuba abenothungelwano olomeleleyo lwamazwe aphesheya ukukhuthaza uphuhliso olunzulu lwentengiso yaseTshayina ngokudibeneyo nababonisi abagqwesileyo bamanye amazwe nabasekhaya.
"Umboniso weMveliso yezeMpilo eNtshona China" uza kudlala indima ebalulekileyo kwixesha lasemva kobhubhane. Iqonga liza kubonisa izisombululo eziyimpumelelo kunye neendlela zophuhliso lwexesha elizayo kumzi mveliso. Ngeli xesha, siza kugxila kutshintsho kwimveliso, ulungiselelo, ukuthengisa, kunye neendlela zonxibelelwano kushishino ukunceda ukubuyisela umfutho wentengiso kunye nokuseka amashishini amatsha.